Asa tanana tsikelikely hatao ao an-trano - Ikkaro
Ny manao zavatra amin'ny tanantsika manokana no tena mahafinaritra. Mamorona zavatra tsy misy. Ny fahaizana mamerina ireo fitaovana izay inoantsika fa tsy misy ilana azy ary mahita fa manome azy ireo fiainana faharoa izahay.
Manaova asa tanana ary ataovy tsara tarehy izy ireo. Mahafinaritra izany.
Crafts, DIY, ahoana no, mifangaro nefa tsy manana fisarahana mazava. Saika ny zavatra rehetra ao amin'ny bilaogy azontsika lazaina dia asa-tanana, fa amin'ity fizarana ity dia ampidirinay ireo lahatsoratra anaovanay zavatra
Fomba fanamboarana voatavo Halloween
Omaly aho nanao maika voatavo Halloween voalohany. Tsy sarotra mihitsy izany na dia tsy maintsy nataoko tamin'ny alina aza izany ary tsy manana jiro ilaina haka sary tsara aho. Ny voatavo izay ho hitanao dia tsy miova na dia indraindray aza dia toa volomboasary mamirapiratra ary amin'ny fotoana hafa dia manana loko maitso kokoa izy io.
Tamin'ity taona ity dia nividy voatavo iray aho, rehefa nitafy ilay marika hoe Variety: Halloween, tsara, tsy manome fanazavana be dia be antsika izany, mazàna amin'ny zavatra novakiako (hahitana raha misy afaka manamarina izany) dia ampiasainy (Cucurbita Pepo, Cucurbita mifangaro, Cucurbita farafaharatsiny, Cucurbita moschata) inona ireo Voatavo amerikana, izay ampiasain'izy ireo Jack o lanterne, izany hoe ny voatavo Halloween.
Fomba fanamboarana peratra misy pensilihazo miloko
Ity dia iray amin'ireo manam-pahaizana kely izay mahita ny tenanao amin'ny Internet ianao indraindray ary manao ny andronao izy ireo.
Eny, hianarantsika ny fomba fanaovana a peratra krayon vita amin'ny hazo vita amin'ny trano, ary toa izany, milay toy izao
Tena tianao io. Jereo, ahoana no fomba anaovana azy, dia tena tsotra. Na dia eo amin'ny sarin'ny fampianarana aza dia mampiasa lathe izy ireo, azontsika atao amin'ny fomba vita an-trano kokoa izany na dia hampiasa fotoana bebe kokoa amin'ny fitaovana multifunction aza izahay, na dia amin'ny fitaovana an-tanana aza.
Fomba fanamboarana fonosana amin'ny fingotra EVA hampihenana ny findainao
Imbetsaka rehefa miantoka ny finday izahay Tsy fantatsika hoe aiza no hamela azy ary miafara amin'ny fametrahana azy amin'ny tany isika, na eo ambonin'ny radiator, amin'ny latabatra lavitra iray izay avela mihantona ny tariby miaraka amin'ny loza atahoran'izay olona sendra mandalo izany amintsika.
Hanao tsotra be aho tranga hitazonana ny smartphone amin'ny charger ary hadinoy ireo olana ireo.
Azo atao amin'ny fitoeram-tavoahangy poakaty ihany koa izany, manamboatra harona kely, saingy ratsy kokoa ny vokatr'izany.
Recycle can of tuna
Mahafinaritra sy tsotra asa tanana hatao amin'ny ankizy. Momba izany amboary na ampiasaina indray amin'ny kapoaka hahazoana mpihazona labozia na vilany voninkazo. Hahazo valiny lehibe isika afaka segondra vitsy.
Andao àry hidina amin'ny orinasa.
Mila kapoaka efa nampiasaina sy fantsika hazo vitsivitsy izahay. Miaraka amin'ireo hazo dia tena kanto izy io, fa miaraka amina tweezers plastika miloko dia hahazo valiny tena tsara ihany koa isika ;-)
Ahoana ny fomba hanaovana karatra krismasy namboarina
Ho avy ny krismasy !!! Fotoana izao hanomanana ireo tetikasa tianay hampiasaina ao anatin'ny herinandro vitsivitsy. Ary… Tohizo ny famakiana
Ahoana ny fomba ahazoana mahatsapa Andriamatoa Ovy
Andao andramana asa tanana tsotra izay ho lasa kilalao ankafizin'ny ankizy kely ao an-trano. Fantatro … Tohizo ny famakiana
Mandoko amin'ny kaopy atody baoritra
avy amin'ny Fako asehoy anay ny asan'i Enno of Kroon
Nomeny anarana mihitsy aza io fironana io Eggcubism
Hatramin'izao dia mbola nampiasainay ny kaopy atody artón, tany amin'ny efi-trano na fitaovana mozika ary nilalao lalao. Mancala
Ahoana ny fomba fanaovana moto misy jiro roa
@irreductible dia mampahafantatra ahy amin'ny alalàn'ny twitter momba an'ity lesona ity. Ny marina dia heveriko fa mendrika ny hamerina azy io ary mijanona ... Tohizo ny famakiana
Fomba fanamboarana ny badge
Tianao ve satroka tavoahangy labiera?
Andao ataontsika izany andriamby. Amin'izay mba? HO AN'NY ataovy ao anaty vata fampangatsiahana izy ireo ary afaka asehony manaova kilalao andriamby ohatra ny takelaka ary azo antoka fa afaka mieritreritra fampiasana hafa ianao.
Ahoana ny fomba fanaovana whiteboard
Hainareo rehetra inona a Birao fotsy.
Ireo takelaka ireo izay misy marika manokana dia azonao soratana sy hamafana im-betsaka araka izay itiavanao azy.